GPS-n'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Journal succession > 2015-03 mpandimby ny Magazine > GPS avy amin'Andriamanitra
GPS dia midika hoe Global Positioning System ary mitovy amin'ny fitaovana ara-teknika rehetra azonao tazonina eny an-tananao ary mampiseho anao ny lalana rehefa mivoaka sy mandeha any amin'ny faritra tsy fantatra ianao. Tena mahafinaritra tokoa ireo fitaovana finday ireo, indrindra ho an'ny olona toa ahy izay tsy manana fahaiza-manao tsara. Na dia nanjary marina kokoa aza ny fitaovana mifototra amin'ny zanabolana nandritra ny taona maro, dia mbola tsy mety diso izy ireo. Tahaka ny finday, ny fitaovana GPS dia tsy manana fandraisana foana.
Misy ihany koa ny tranga sasany izay nalehan'ny mpandeha tamim-pahalalana ny GPS ary tonga tany amin'ny toerana izay tsy tanjony akory. Na hitranga aza ny iray na roa ny mishaps, fitaovana GPS tena fitaovana lehibe. GPS tsara dia mampahafantatra antsika ny toerana misy antsika sy manampy antsika hahatongavana any amin'izay tadiavintsika nefa tsy ho very. Manome antsika torolàlana ahafahantsika manaraka izao: “Ankehitriny mivily. Mihodina miankavia amin'ny 100 m. Mihodina amin'ny fotoana manaraka. ”Na dia tsy haintsika hoe aiza ny lalana halehantsika, ny GPS tsara dia azo antoka fa hitarika antsika mankany amin'ny alehantsika, indrindra raha mihaino sy manaraka ny torolàlana isika.
Taona vitsy lasa izay dia nanao dia niaraka tamin'i Zorro aho ary raha nandeha fiara tsy fantatra izahay avy any Alabama mankany Missouri, dia notohizan'ny GPS hatrany izahay hitodika. Fa i Zorro dia manana fihetseham-po tsara momba ny lalana ary dia nilaza izy fa ny GPS dia te handefa anay ny lalana diso. Satria matoky an'i Zorro am-pitiavana aho sy ny fahatsapany ny torolàlana dia tsy nieritreritra izany na oviana na oviana aho rehefa nanala ny GPS tao anaty fahasosorana izy. Tokony ho iray ora taty aoriana dia nahita izahay fa marina ny GPS. Namadika ny fitaovana indray i Zorro ary tamin'ity indray mitoraka ity dia nandray fanapahan-kevitra izahay mba hihaino ny torolalana. Na ny mpanakanto mahay tsara indrindra aza dia tsy afaka matoky foana ny fahatongavan'izy ireo. Izany no antony maha-GPS tsara azy, dia mety ho fanohanana lehibe rehefa mandeha.
Ny kristiana dia mandrakariva amin'ny dia. Mila GPS tsara isika miaraka amin'ny fahefana ampy. Mila GPS tsy hamela anay hihantona eo afovoany ianao. Mila GPS izay tsy ho very isika ary tsy handefa anay mihitsy. Mila GPS-n'Andriamanitra isika. Ny GPS ao aminy no Baiboly manampy antsika hitoetra eo amin'ny làlana mahitsy. Ny GPS no ataontsika ho mpitari-dalana antsika. Ny GPS GPS dia ahafahantsika mifandray mivantana amin'ny Mpamorona manodidina ny famantaranandro. Tsy misaraka amin'ny mpitari-dalana antsika mihitsy isika ary tsy mety misy ny GPS. Raha mbola miaraka amin'Andriamanitra isika, miresaka aminy ary mamboly ny fifandraisantsika aminy, afaka matoky isika fa ho tonga soa aman-tsara any amin'ny toerana farany halehantsika.
Misy tantara iray izay nitondran’ny raim-pianakaviana ny zanany lahy nandehandeha tany anaty ala. Raha mbola teo izy ireo, dia nanontany an’ilay zanany ilay raim-pianakaviana raha fantany ny misy azy ireo ary raha very izy ireo. Dia namaly ny zanany hoe: “Ahoana no nahavery ny lalako? Miaraka aminao aho. ”Raha mbola manakaiky an’Andriamanitra isika dia tsy ho very. Hoy Andriamanitra: “Izaho dia te hampianatra anao sy hanoro anao ny lalana tokony haleha; Hitarika anao amin’ny masoko aho.2,8). Afaka miantehitra amin'ny GPS an'Andriamanitra foana isika.